Iindaba -Uzifaka njani iipaneli zokuhombisa udonga lwepvc
Iipaneli zodonga ze-PVC lukhetho olufanelekileyo lokuhombisa udonga. Iziphumo zokuhombisa ziziphelo eziphezulu kakhulu kwaye ixabiso liyafikeleleka. Kuya kufuneka ufunde ulwazi oluthile lobuchwephesha xa ufaka, ukuze ulwakhiwo lomhombiso lukhawuleze kwaye umphumo wokuhombisa unokuqinisekiswa. Makhe ndinazise, ​​ungayifaka njani ibhodi yokuhombisa udonga lwe-pvc?
1. Uyifaka njani ibhodi yokuhombisa udonga lwepvc
1. Xa uhombisa, ungakhetha uhlobo olomileyo lokunqunyanyiswa, kubandakanya nokulungisa inkcenkce eludongeni olusezantsi kuqala, nokudibanisa ibhodi yokugquma ubushushu ngokuhombisa ngeelinki ngamalungu esinyithi okanye iiankile ezizodwa. Amalungu phakathi kwamalungu angatywinwa yinkqubo yokugquma eludongeni lwangaphandle lwebhodi ekhutshiweyo, ibhodi ye-benzene okanye uboya belitye. Gcwalisa.
2. Uhlobo oluxhotyiswe ngokupheleleyo lufaneleke ngakumbi kwiiprojekthi zangaphakathi zodonga. Ke ngoko, ngexesha lofakelo lwenkqubo yokugquma yokufudumeza yangaphandle, ibhodi yokuhombisa yokuhombisa ehlanganisiweyo kunye nodonga olusezantsi zinxulunyaniswa kuphela ngokudibanisa okanye ukudibanisa okupheleleyo, okubizwa ngokuba luhlobo oludibeneyo. Indlela yesandla kufuneka igqitywe ngokweemfuno zoyilo lwesakhiwo esithile. Sebenzisa udaka olulodwa oludibeneyo okanye ezinye izinto ukuzalisa indawo phakathi kwamalungu.
3. Indibaniselwano yentonga yeankile kunye nentonga yeankile ubukhulu becala isekwe kwiimfuno zokwakha. Inkqubo yangaphandle yokufudumeza ubushushu bebhodi yokuhombisa yokufudumeza ubushushu idityaniswe ngokudibeneyo kunye nentonga ye-anchor ukulungisa i-thermal insulation board ebhodini. Isiseko sidityaniswe sisibophelelo esidityaniswe ngokupheleleyo nesomileyo, kwaye sisetyenziswa ngokubanzi kubunjineli.
2. Intshayelelo eziluncedo eludongeni PVC
1. Olona ncedo lukhulu ubunzima bayo obulula. Abasebenzi babekhululekile kakhulu ngexesha lokwakha. Inobushushu obushushu bokugcina ubushushu kunye nomsebenzi wokugcina ubushushu. Sebenzisa ibhodi yokuhombisa udonga lwe-PVC. Ngandlela thile, inobuhlobo kakhulu kwindalo esingqongileyo. Indlu yasebusika. Ihlobo lifudumele kwaye lipholile, lisusa isidingo somoya ococekileyo kunye nokonga amandla amaninzi, kodwa ikwanazo nezinto ezinobungqina bokufuma-ubungqina, ukudodobala kwelangatye, ukumelana ne-asidi kunye nealkali, ukumelana nokubola, ikhitshi okanye iisilingi zokuhlambela okanye iindonga zokuhombisa.
2. Iipaneli zodonga lwePVC ezihombisayo zinokuzinza okuphezulu kunye neempawu ezifanelekileyo zedijithali. Emva kokusetyenziswa kwexesha elide, ihlala ixesha elide kunezinye izinto zokuhombisa udonga. Akoyiki ukuqaqamba nelanga. Inezinto ezifanelekileyo zokulwa ukwaluphala. Kulula ukuwelda emlonyeni kwaye unamathele kakhulu eludongeni.
3.Ubume obuphakamileyo, amandla okugoba okuphezulu, ukunganyangeki kwefuthe, ukuphakama okuphezulu ngexesha lekhefu, ukugcina izinto emva kokugqiba umhombiso, akukho lula ukwenza inkunkuma kunye nokonga iindleko zokuhombisa. Ibhodi yokuhombisa udonga lwe-pvc inomphezulu ogudileyo, imibala eqaqambileyo, iipateni ezahlukeneyo, iziphumo zokuhombisa ezizityebi kakhulu, kunye noluhlu olubanzi lwezicelo zokuhombisa.
4. Inkqubo yokwakha ilula kakhulu, ilunge kakhulu ukuqala ukufakelwa ekhaya, kwaye ukufakela kulula kakhulu. Ibhodi yokuhombisa eludongeni ye-PVC kulula ukuyicoca kubomi bemihla ngemihla. Akoyiki nayiphi na isuphu okanye abantwana abenza igrafiti ngokuthanda kwabo. Sula ngobunono ngelaphu elifumileyo ukubuyisela ucoceko.
5. Ibhodi yokuhombisa udonga lwePVC yinto yokuhombisa yeplastiki. Ibhodi yePvv yenziwe nge-honeycomb mesh structure. Ngenxa yokubalula kwayo, imibala kunye neepateni, kuyinto yokuhombisa, ekwabizwa ngokuba yifilimu yokuhombisa, enokusetyenziselwa ukuhombisa udonga lwangaphakathi kunye nophahla, kwaye isetyenziswa ngokubanzi kwiindlela ezahlukeneyo zokuhombisa ikhaya.